Valala fanetribe – IFVM
Misy karazany roa ny valala nokilasina ho fanetriben’ny firenena eto Madagasikara, dia ny:
Valala tompon-tany na valala vao
Valala mena elatra (antsoina ihany koa hoe Gadondoha, Bekapaky, Gapanga, Kapanga, Dara mena, Tara mena, Gamena, Kimendry na Mendry)
Antsoina hoe fanetribe izy ireo satria manana toetra miovova arakaraky ny hakitroka(densité) sady afaka mitangorona ary mivadika ho andiany maro sady matevina ary koa manilba sy mamotika voly hatramin’ny hektara maro. Telo karazany ny toetra mety hananan’ny valala fanetribe: mandeha irey (solitaire), anelanelany (transiens), ary koa maneha andiany (grégaire). Mandalo ambaratonga telo ny valala fanetribe: atody, kijeja, valala manan’elatra (renimbalala). Ny antsoina hoe renim-balala dia valala lahy na vavy afaka manidina sy afaka manao firaisana.
1/Ny valala vao na valala tompon-tany:
Any amin’ny faritra atsimo sy atsimo andrefan’ny Madagasikara no tena ahitana ny valala vao sy mampirongatra azy, any ihany koa no misy faritra fanatodizany sy fitomboany (aire grégarigène). Misy ambaratonga 6 raha mandeha irery ny valala vao ary ambaratonga 5 raha mandeha andiany. Ny halavany sy ny lokony no mampiavaka ireo dingana ireo. Mirefy 38-44 mm ny halavan’ny valala vao lahy ary 36-54 mm ny valala vao vavy. Miloko manara-bolo-tany izy raha mandeha irery, ary somary manopy mavo izy raha mandeha andiany. Amin’ny alina no manidina sy mifindra toerana ny valala vao mandeha irery, ary amin’ny atoandro kosa raha manana toetra mandeha andiany. Ny karazana fataka sy bozaka toy ny vary, katsaka, varim-bazaha, fary… no sakafony
Ny atody: manatody 60 ka hatramin’ny 120 ny valala vao iray, 12 ka hatramin’ny 45 andro ny fotoana fikotrehany, afaka manatody in-3 na in-4 ny renim-balala iray
Ny kijeja: misy ambaratonga 5 ny kijeja mandeha irery, ary ambaratonga 6 raha mandeha andiany. Afaka 37 ka hatramin’ny 53 andro izy dia lasa renim-balala.
2/Ny valala mena elatra:
Manaranaka indray mandeha isan-taona ny valala mena elatra, mampiato ny fivoarany izy rehefa maitany. Somary lehibebe kokoa nohon’ny valala vao izy (7cm). Ny lokony dia volotany somary manopy mena, misy tsipika midina ny ati-masony ary misy tsipika fotsy mitohy hatrany antampon-dohany ka hatrany amin’ny lamosiny. Tsy mifidy hanin-kohanina ary mankatia hazo ny valala mena elatra. Manomboka amin’ny volana novambra ka hatramin’ny volana febroary ny fanatodizany; 24 ka hatramin’ny 28 andro ny fotoana fikotrehany. Roa volana eo ho eo ny ijanonany ho kijeja ary dia lasa arielatra izy.
Ny atody: 80 ka hatramin’ny 150 ny isany. Afaka manatody in-3 na in-4 isaky ny 10 andro
Ny Kijeja: manana ambaratonga 6 ka hatramin’ny 7 ka ambaratonga 6 kosa raha mandeha andiany ary ambaratonga 7 raha mandeha irery. 12 ka hatramin’ny 14 volana no fe-potoany ivelomany.